Barea sy ny Can: hoy izy ireo | NewsMada
Barea sy ny Can: hoy izy ireo
Ny filoha Rajoelina Andry: “lavo isika fa tsy miondrika. Ary vao mainka hitraka hanandratra hatrany ny hambompom-pirenena. Misaotra anareo Barea, nitondra avo ny fanevantsika, nanoratra ny tantara ary nampiray fo ny Malagasy rehetra. Reharehan’ny firenena ianareo. Nahavitantsika mihoatra lavitra no ho ireo efa mpandray anjara hatrizay iny. Hotohizantsika ny ezaka efa vita ary hohatsaraintsika hatrany ny tontolon’ny fanatanjahantena. Tsy maintsy mitraka sy tafita i Madagasikara!”
Ny minisitry ny Fanajariana ny tany, Andrianainarivelo Hajo: “niady mafy ho an’ny firenena malagasy ary nitondra avo ny hambompom-pirenena ny Barea. Voarakitra ho tantara eo amin’ny sehatry ny baolina kitra, manerana an’i Afrika, eny manerana izao tontolo izao, ny zava-bitanareo. Tsy mitsanga-menatra ny vahoaka malagasy manana anareo, ary nanokatra pejy vaovao ho an’ny fanatanjahatena malagasy ianareo. Misaotra ny Barea ».
Ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc : « Misaotra Barea niady ho an’ny voninahim-pirenena. Nentinareo avo tokoa ny faneva, tafiakatra Can, tody hatramin’ny ampahaefadalana. Zava-dehibe izany. Mpandresy ianareo aminay. Misaotra tamin’ny zavatra rehetra. Ary ombanay firariantsoa mandrakariva. Misaotra Barea!”